I-Creekside Cabin-Gorgeous Mountain/River Views-New - I-Airbnb
I-Creekside Cabin-Gorgeous Mountain/River Views-New
Moyers, Oklahoma, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Robert
Ikhabethe elihle elincane le-rustic emaphethelweni ewa kwelakho eliyimfihlo elingamahektha ayi-12. Igumbi lokulala eli-1 + 2 izindawo zokulala eziphakeme +usofa wokudonsa. Amathani omzwilili, alungele ukuqwala izintaba, umlilo wasekamu, ukubhukuda, noma ujabulele ukuhlala kuvulandi futhi ulalele umsindo womfudlana ongezansi bese uphuza ikhofi lakho. Le khabethe ilungele izithandani noma ukuhlola i-Mother Nature. Kukhona umgodi omuhle wokubhukuda onesiphethu semvelo esingamayadi ayi-100 ukusuka kukhabhinethi! Le khabethe incane kodwa ithokomele kakhulu!
Bhuka le ndawo Uma ufuna ukuba kude nedolobha, futhi uthathe umoya ojulile wemvelo. Ibhukhe uma ungafuni abantu ongabazi phezu kwakho ngesikhathi seholide lakho. Yilokho kuphela okulapha nguwe nezihlahla, i-bluff ebheke umfudlana, nezinyoni ezikuzungezile. Uzimele futhi kuhle ukuhlala kuvulandi uzwe umfudlana ongezansi futhi ujabulele inkomishi yekhofi. Uma lina liphenduka umfula futhi lizwakala ngendlela emangalisayo. Umakhelwane oseduze ukude cishe ngamayadi angu-200 futhi akulutho ngaphandle kwezihlahla phakathi kwenu nobabili, awukwazi ukuzizwa noma ukubona noma iyiphi ingxenye yekhaya labo. Le ndawo ilungele imindeni ezama ukuphuma edolobheni futhi ujabulele i-Mother Nature. Okokuba imindeni ihlale eduze komlilo futhi ifundise izingane ukwenza ama-s’more. Unamahektare akho ayimfihlo ayi-12 endaweni eyi-bluff enkulu ebheke umfula! Kungakho kufanele ubhukhe kodwa ngicela uma ufuna ikhabethe elikhulu eliwubukhazikhazi ubheke kwenye indawo ukuze ungaphoxeki! Lokhu okwabathandi bemvelo, imibhangqwana efuna ukubaleka ethule efuna ukuphuza ikhofi kuvulandi obheke umfudlana olalele imvelo. Okokuba izingane zihlole futhi zidlale ngaphandle kokukhathazeka ngokusondelana kakhulu nomakhelwane bakho bekhabethe.
Kukhona ipaki elikhulu eliseduze (Kiamichi Park) elilungele ukudoba, nokuhamba izintaba. Futhi kukhona i-K River Campground ejabulisa ngempela uma ufuna ukuhamba ngesikebhe, noma uyodoba.
I-Saradis Lake iyichibi elihle eliqhele ngemizuzu engama-30 kuphela.
I-Antlers iqhele ngemizuzu eyi-10 futhi inakho konke ozokudinga. Isitolo esikhulu segrosa, izindawo zokudlela eziningi ze-BBQ, ukudla okumangalisayo kwase-mexican esigcawini, nakho konke ozokudinga ngenkathi ujabulela ukuhlala kwakho.
Ikhabethe lincane ngakho ngicela ukukhumbule lokho uma ubhukha!! inakho konke okudingayo futhi iphumule kakhulu wena nabathandekayo bakho. Le khabhini isemaphandleni e-Oklahoma futhi sifuna ukuthi uyibhukhe uma ufuna ukuzwa izwe lase-Oklahoma. Ikhabhinethi inomqansa omfushane ukufika kuyo ngakho-ke sicela ushayele imoto eyanele (azikho izithuthuthu). Amanzi ompompi amanzi emvula ngakho awukwazi ukuphuza lawo manzi kodwa ngiletha amanzi okuphuza e-Primo atholakala ku-premier water dispenser.
Ngisanda kuthuthukisa umbhede waba inkosi for the master bedroom but i-sofa iyakhipha futhi iyindlovukazi uma izingane zakho zincane. Kanye nemibhede yosayizi ogcwele emibili phezulu ku-loft. Igumbi lokulala elikhulu alilikhulu kakhulu; umbhede uthatha ingxenye enkulu yegumbi. Nginqume ukuthi abantu abaningi bancamela ukuba nendawo encane kodwa umbhede olingana nenkosi uma bengekho. Singathanda ukuthi ube nesikhathi esingcono sokulala ngakho-ke sinqume ukulahlekelwa isikhala futhi sinikeze umbhede omkhulu osayizi wenkosi. Inkosi ineyunithi yewindi le-ac futhi isiza ngempela ukugcina igumbi lipholile phakathi nezinsuku ezishisayo zasehlobo. Letha ama-marshmallows akho, ushokoledi, ama-graham crackers futhi ujabulele!
Izilwane ezifuywayo azivunyelwe . Kuzothunyelwa inhlawulo ka-$500.
I-Hulu , i-Netflix, i-Disney+ ifakwe ekamelweni eliphezulu. Isidlali se-DVD ekamelweni eliyinhloko kanye ne-loft, amamuvi amaningi ahlinzekwe ukuze afinyeleleke.
Imidlalo yebhodi inikeziwe
1 umbhede omkhulu, imibhede eyidabuli engu- 2, 1 usofa
Mina nomkami besifuna indawo yokuhlala yangasese nengasese ngonyaka odlule ngalowo muzwa wentaba. Kwadingeka sishayele amahora angu-8 ukusuka e-Dallas ukuya e-Arkansas ukuze sithole noma yini esiyithandayo. Bengifuna into yangempela, into lapho unesikhala, nomhlaba ukuthi ukhululeke ukwenza noma yini oyifunayo ngaphandle kokubuka abantu. Ngangifuna indawo yokuphumula futhi ngibukele ama-hummingbirds kuvulandi. Le ndawo inakho konke lokho. Izinyoni eziningi ngaphandle komnyango wakho ongaphambili eziqhele ngamafidi angu-4 uma uhlezi ezihlalweni ezinyakazayo. Sike sabona ama-hummingbird angu-8 ngesikhathi esisodwa ngenkathi sihlezi kuvulandi ephuza kumphakeli wethu we-hummingbird. Kuyinto emangalisayo. Ama-otters asendle ngezinye izikhathi angatholakala kumayadi angu-50 ukusuka ku-cabin. Le ndawo igcwele imvelo futhi igqamisa ngempela ubuhle obutholakala e-Oklahoma.
Lena ikhabethe lakho ngenkathi ulapha. Awusoze wangibona ngaphandle kokuthi ungidinga, noma omunye wabahlanganyeli bami. Uhlala ukhululekile ukungishayela noma ukungithumelela umbhalo nganoma imiphi imibuzo ongase ube nayo.